Atariisho laga xaday abaalmarintii Oscars saacado kadib markii la guddoonsiiyay - BBC News Somali
Atariisho laga xaday abaalmarintii Oscars saacado kadib markii la guddoonsiiyay
Image caption Frances McDormand ayaa heshay abaalmarinta Oscars 21 sano kadib teedii koowaad
Booliiska magaalada Los Angels ayaa xaqiijiyay in ay xabsiga dhigeen nin lagu magacaabo Terry Bryant oo xaday abaalmarintii aflaamta ee Oscars ee la siiyay atarashiida Frances McDormand habeen ka hor.
Ninkan oo maxkamad la horgeyn doono ayaa waxa uu banaanka ku iman karaa damaanad lacageed oo dhan $200,000.
Abaalmarinta oo ah taalo yar oo loo ekeysiiyay qof ayaa loosoo celiyay haweenayday oo ku guuleystaya kaalinta atarashiida ugu fiican ee tartanka jilliinka ee Oscars, kaas oo sanadkiiba xilligan oo kale la qabto.
Inaad daawatid filimaanta 'waxay leedahay faa'iido'
Askariyad caan ah oo Kurdi ah ayaa ku dhimatay dagaalka IS
Sridevi oo la sheegay in ay ku ‘hafatay’ barkadda qubeyska
Mr. Bryant ayaa la sheegay in uu heystay warqadda casuumadda ee xafladdii casho sharafka ee loo sameeyay jillaayasha.
Waxa ay abaalmarinta ku heshay filimka Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, oo ay ku jishay hooyo aargudasho samaynaysa kadib markii dowladda ay wax ka qaban weysay gabadheeda oo la kufsaday, kadibna la dilay.
Waa abaalmarintii labaad ee Oscars oo ay hesho kadib 21 sano oo ay heshay abaalmarintii koowaad oo ay ku qaadatay filimka Fargo.